စိတ်ကူးပုံရိပ်: ဘလောက်ဂ်ဂင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 04:00
Parallel Universe ထဲ Sis ပုံရိပ်ကို အတုလား အစစ်လား လာချောင်းသွားပါတယ်. :)
ဒီပို့စ်လေးကို Myanmar Blogs Digest Page လေးအတွက်ပါ ယူသွားလိုက်မယ်နော်. ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ Sis.
ဘလော့ထဲက ပုံ၇ိပ်ယောင်ကို ခင်နေတာတော့ ကြာပြီ။ပုံရိပ် အစစ်ကိုလည်း တွေ့ဘူးချင်တယ်။ စာပြန်ရေးတာ ၀မ်းသာတယ် ပုံရိပ်ရေ ...